Saturday December 07, 2019 - 08:57:03 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Askari Sacuudiyaan ah oo tababar duuliyanimo ku baranayay gudaha Mareykanka ayaa toogasho ugeystay askartii saaxibadiisa aheyd ee tababarka dhanka duuliyanimada siinayay.
Duulyaha Sacuudiyaanka ah ayaa ugu yaraan sedax askari ku dhax dilay saldhigga ciidanka badda Mareykanka ee kuyaal gobolka Floorida, Mas'uul American ah ayaa sheegay in toogashada oo ka dhacday saldhigga Pensacola,FL uu sababay dhimashada Afar qof oo uu kamid yahay ninkii toogashada geystay.
Afhayeen u hadlay ciidanka Badda Mareykanka oo lagu magacaabo Lieutenant Commander ayaa dhacdadan xaqiijiyay wuxuuna sheegay in uusan caddeyn karin in askarta ladilay ay tababaraasha saldhigga Pensacola,FL ka mid ahaayeen iyo inkale.
Saldhigga weerarku ka dhacay waxaa ka howlgala illaa 16 kun askar iyo saraakiil ah waxaana halkaas ku sugan kumanaan kun oo ah askar Ajaanib ah oo tababarro dhanka duuliyadda ah barta.
Boqorka Sacuudiga Salmaan Bin C/Caziiz ayaa khadka taleefanka kula hadlay Trump wuxuuna uga tacziyadeeyay askarta laga dilay, sidoo kale Trump oo hadlay ayaa meesha ka saaray in askariga toogashada geystay uu metelo shacabka Sacuudiga sida uu hadalka u dhigay.
Isbuucii lasoo dhaafay toogasho sidaan oo kale uga dhacday saldhig kuyaal gudaha Mareykanka waxaa ku dhintay Afar askari oo uu kamid ahaa ninkii weerarka geystay oo American ahaa.